Chequeado.com: Fiaraha-Mientan’ny Mpanao Gazety Arzantiniana ‘Hanamarina’ ny Lahateny Kabariana Ampahibemaso ao Amerika Latina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Febroary 2017 5:16 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Aymara, عربي, Português, македонски, русский, বাংলা, Español
Ny ekipa mpanao fanamarinana miasa amin'ny fomba fiasa sy ny fitaovana fanamarinana . Sary : Pablo Martín Fernández, nahazoana alàlana avy amin'ny Creative Commons.
Hatramin'ny fiandohan'ny taonarivo vaovao, nomena ny olon-drehetra ny fahazoam-baovao ary mampiasa tendry tsotra fotsiny ihany dia efa afaka mijery izany noho ny fivelaran'ny aterineto sy ny firoboroboan'ny tambajotra sosialy. Tombontsoa ho an'ny olom-bitsy ihany ny fahazoam-baovao roapolo taona lasa izay. Ankehitriny, zon'ny olom-pirenena tsirairay ny mahazo izany ary fitaovana fototra ampiasaina hiarovana ireo zo hafa maro.
Tsy isalasalana, sabatra roa lela ny fahazoana vaovao maro be: manao ahoana ny hatsaran'izany vaovao izany? Azo antoka ve? Tokony inoana avokoa ve izay lazainy rehetra? Ny zava-drehetra izay vakintsika?
Fitaovana voalohany natokana ho fanamarinana ny kabary omena ny daholobe any Amerika Latina ny Chequeado.com. Naorin'ny vondrona mpanao gazety Arzantiniana tamin'ny taona 2010 ity tetikasa fototry ny Orina Mpanasoa La Voz Pública ity ary mamariparitra ny tenany ho “tranonkala tsy manohana politika sy manamarina ny fanambaran'ireo mpanao politika, ireo mpitari-kevitra, ireo mpandraharaha, ny fampitam-baovao na ireo sehatra hafa . “
Ampahany amin'ny hetsika maneran-tany izay mampiroborobo ny fanamarinana ny zava-misy ny tetikasa ary teraka tany Etazonia tamin'ny taona 2003 tamin'ny fananganana ny Factcheck.org, fikambanana iray tsy mitady tombontsoa, izay mikasa ny hanamarina ny diso, ny zavatra tsy mitombina ary ny lainga ao anatin'ny kabary omena ny daholobe, tsy amin'ny lafiny politika ihany fa amin'ny lafiny kolontsaim-bahoaka ihany koa .
Tao anatin'ny lahateny iray nandritra ny kaoferansa tamin'ny Oktobra 2013, niresaka ny maha zava-dehibe ny tokony hanamarinana ny vaovao rehetra izay azonay i Laura Zommer, talen'ny Chequeado.com, izany dia ny mba “hampihenana ny tsimatimanota ara-tsaina amin'izay hambara, na soratana, na hampanantenaina , na tsikeraina , na hafenina “.
Ampangain'ny manampahefana ho mpanohitra sy manohitra [izay ataon'ny] governemanta izahay. Soa ihany, satria tsy mikasa ny hinamana amin'izy ireo izahay, fa mikasa hanangana vondrom-piarahamonina aminareo. Ny fanamarinana amin'ny alalan'ny zava-misy marina no inoanay ary laharam-pahamehana alohan'ny fitsaratsarana mialoha sy ny fomba fihevitry ny tena manokana izany.
Tetikasam-panangonam-baovao fanadihadiana tohanan'ny paikadin'ny fanohanana ara-bola isankarazany ny Chequeado.com. Manana bilaogy, pejy Facebook sy Twitter, ary koa newsletter izy .